ULUTSHA LUKA-SONIC: I-NYC GHOSTS KUNYE NEFLABATHI YOKUHLOLWA KWEALBHAMU - IINDABA
NYC Ghosts kunye neentyatyambo
Hayi, andilibalanga ukubeka amanani kwizithuba zokulinganisa apha ngasentla. Kwiminyaka emibini yokubhala ...
Hayi, andilibalanga ukubeka amanani kwizithuba zokulinganisa apha ngasentla. Kwisithuba esingaphezulu kweminyaka emibini yokubhalela iPitchfork, bendilinde i-albhamu enye eya kuthi iqinisekise i-0.0- mhlawumbi ndide ndinqwenele nomncinci o.o. Kwiminyaka yam emihlanu yokufunda iPitchfork, ndinokukhumbula kuphela i-0.0s, ekunokwenzeka ukuba uphume kwikhibhodi ebusayo kaJason Josephes. Ngoku, ekugqibeleni, isizukulwana sam sinayo Umculo woMatshini wentsimbi -icwecwe elingenakuthelekiswa nanto eliza kuthi livakale kwiinkundla zesikwashi kunye nobusuku obuvulekileyo be-mic yesihogo esinzulu. Ubuncinci uLou Reed wayenobabalo olulungileyo lokugcina umlomo wakhe uvaliwe kwindawo yakhe yokugaya ye-ejaculation yokuziqhenya.
Thina maChicago sinenkani yokuzingca. Sikhwaza sinyelisa iNew York ngemilomo egcwele izinja ezishushu zenyama yonke kunye nebhiya yakudala. Le nzondo ngokubanzi ibangelwa kukubizwa ngokuba 'sisiXeko sesiBini.' Nangona kunjalo, iimpawu zomhlaba ezifana NYC Ghosts kunye neentyatyambo gxininisa ukungathandi kwethu ngokukhawuleza. Iicwecwe leshumi elinesihlanu le-Sonic yolutsha yonke into esiyithiyileyo malunga neNew York ibe sisihlunu esinye esifanelekileyo. Eyona nto ilahlekileyo ziiMets. Ulutsha lwe-Sonic lusikhumbuza ukuba abantu baseNew York abamhlophe basakhula iipatches zomphefumlo kunye neebhokhwe, banxibe i-berets kunye neekepusi zerasta, batye kwi-tofu eyosiweyo kwi-emulsification yebhotolo yebhokhwe kunye ne-kumquat, kwaye ubukele amaxwebhu amaDatshi malunga nokubetha .
Aba bantu baneminyaka engama-40 + bayaqhubeka nokusebenza phantsi kwembono yokuba babalulekile. Nangona kunjalo, enye yezona zinto zifuneka kuqala ukuze ube 'sisilingo' okanye 'phantsi komhlaba' kukuba, ezantsi kwendlela, umntu kufuneka aphenjelelwe ngumsebenzi kunye nezinto ezifanelekileyo kwindibaniselwano efanayo. I-noodling encinci ivuliwe NYC Ghosts kunye neentyatyambo Ukuphinda ufunde kwakhona izidumbu ezinqabileyo zemibongo kunye nengxolo ye-avant-garde.
Ngandlela thile, iziphoso zikaSonic zoLutsha azinantlukwano kunokuba, yithi, yiGazi leHlabathi. Apho i-Bloodhound Gang ityhala i-Beastie Boys kunye ne-'South Park 'iziqhulo kubathengi abancinci, i-Sonic Youth scrap kunye u-Yoko Ono, u-Glenn Branca, no-Allen Ginsberg kwimveliso enkulu yelebhile. Kodwa njengokuhlala kwi-Big Apple, uhlawula nje ngaphezulu. Ayizombono zintsha ezi. Ezi zizimvo ezazinekratshi kwaye zingaphawuleki ekuzalweni kwiminyaka engama-30 eyadlulayo. Ulutsha lwe-Sonic ludala ngokwaneleyo ukuba lwazi loo nto! UThurston Moore wanamathela kwimikhono ye-albhamu kaJohn Cage kwizithethi zakhe kwaye uKim Gordon wadlala indlu kunye noKathy Acker.
Ngokuothusayo, ngaphandle kwezinye ii-crescendos ezigqwethekileyo kwi-'Renegade Princess 'kunye ne' Nevermind, 'ivolumu apha igcinwe kwinqanaba elincinci. Ukudanyaza kunye nokukhala ngaphezulu kweendlela. Ngoku hayi Igama kwigama elithi 'Sonic Youth' lifanelekile. 'Ingoma' isenokuba kukuthintela isiseko esiphindaphindayo ('ecaleni2side') okanye ukurabha iminwe esetyenzisiweyo ngaphezulu kwemitya engenanto yegitala (ikakhulu yonke enye into).
Amanqaku e-horror-score of 'Free City Rhymes' asondela kufutshane ku-Sonic Youth-okanye ubuncinci awona maxesha mabi Amagqabi aliwaka -kwaye ibonisa i-albhamu kuphela 'yokucula' efanelekileyo. Kwenye indawo, ligama elithethiweyo (okanye kwimeko kaGordon, grunted), umgangatho wayo usikhumbuza iiklasi zemibongo emitsha apho la mntu unqula ii-Doors ecengceleza ebetha iprozi kwihlazo leklasi iphela. Umgca ngamnye ngumzekelo ophambili, kodwa abanye bafuna isilumkiso esongezelelweyo. Umzekelo, uKim Gordon uyakhalaza (ngonobumba omncinci): 'amakhwenkwe aya kwijupiter ukuze afumane ububhanxa / amantombazana aye ezihlangwini, abe ziinkwenkwezi zerwala,' ngaphambi kokuba afune uThixo ngokuvala, 'ndibethe / undibethele phantsi / ngombane. ' Ukunxiba kwakhe iimpahla zangaphantsi kuyaqhubeka 'kwicala2lokuncwina' kwe-bra 'kunye' nokukhethekileyo / impahla yangaphantsi. '
Umvelisi uJim O'Rourke ugcina ii-guitars zibhityile kwaye ii-elektriki ze-elektroniki zilungile kwingxowa ye-Hefty ngelixa u-Thurston ewisa ilizwi lakhe kwi-comedic yeNorse embombozela 'kwi-streamXsonic subway.' Kwi-cadence ekhawulezileyo, watshica i-cyberpunk mumbo-jumbo ngathi, 'wanqumlela izitrato zam ezitalatweni / watyhala inkungu ekhutshiweyo / wayifumana indlela yam ngejogs sensoid / isakhiwo sonomathotholo esitsha.' Khawufane ucinge ngale nto ikhonkotha ngaphezulu kwento evakala ngathi yeyokukhwela umatshini obaleka ngaphezulu kwelayini yeTonka. Nabani na owebile izixhobo zikaSonic zoLutsha, nceda ubuyisele. Okanye, mhlawumbi awuzange ube ngokwaneleyo. Kwaye obu bububi bolawulo lwentando yesininzi, u-Lee Ranaldo uthetha ubukrwada uWilliam S. Burroughs wokuzenza ongeyena kwitayitile yomkhondo. 'Hee, ngaba ukho umntu okhe wakhumbula apha uLenny,' ubuza ngokungathi unxibe i-trenchcoat emhadini we-opium.
Njengoko uChip Chanko watshoyo:
Ulutsha lukaSonic = ubukomanisi
Ukuphupha isizwe = Inguquko yaseRussia
Uvavanyo lweJet Setha = Ukuzingela ngo-Okthobha oBomvu
Ke, ngokukuko: umbono obonakala ulungile ephepheni nasekuqaleni, isenzo sobundlongondlongo, kodwa esiye sonakaliswa sangena kumngxunya ongenanto. Kwaye, umntu unokunqwenela kuphela ukuba abe nguSonic kuLutsha ade aye kwisandi se Ukuphupha isizwe Apha. Endaweni yokuba sishiyeke nezakhelo ezisekwe kukukhetha isikhethi kwiFender. Amacwecwe amabini okugqibela alahlekileyo ubuncinci ashiye ii-epics ezintle ezinje nge 'Diamond Sea' kunye 'neeHits of Sunshine,' kodwa le rekhodi ikhupha nje ii-electro-duck quacks ngaphezulu kwento engekhoyo ekuvulekeni 'kweLightnin'. ' Yonke into phantsi kwegrama kunye nemizobo engaphakathi iyalila. Intetho yokuphothisa 'nge-fuck' kunye nokuchwetheza 'yiyo loo nto iye yarhubuluza kwi-yr panic net' iyasilela ukufumana ulwazelelo okanye inyulu kwezi ntsuku. Uncuthu kunye nemvisiswano ziyekisiwe kwinkampu yoLutsha yoNyana. Iibheji zeemerit ngoku zinikezelwe ukuphuma kwegazi kwii-amps kunye nesingqisho 'punk' nge 'slunk.'
iingoma zecwecwe elitsha
I-0.0 ingummangaliso. Kuya kufuneka ndihlale ndibuza esi sigqibo, kodwa ubungqina bukhona. Kuthatha isigebenga ukuwa kwaye yenze le nto inkulu. Iimuvi zasekhaya zinokuba budenge, kodwa iintlekele ze-titanic ziyathanda U-Hudson Hawk kwaye I-Bonfire yeZinto ezingento uye ezantsi kwimbali xa nedama lesakhono, ukugweba okungcono, kunye namava asilelayo ukukhusela umkhukula we-bile. Ulutsha lwe-Sonic lubonakala luzimisele ukuhlala eNew York, kwaye Imimoya kunye neentyatyambo kuvakala ngathi kukuzinikezela ngengqondo ekhayeni labo. INew York, umama wabo, kufuneka azive eneentloni. IChicago ilele kamnandi isazi ukuba khange sivelise ialbham enjalo ... doh! UJim O'Rourke! Hambisa nje, sele!
UCarrie brownstein st vincent
iveki atlanta 2017
Iikumkani zeLeon entsha
Inqanawa yokuphazamisa intsingiselo
ngolwesiHlanu irekhodi yosuku lokugcina irekhodi 2018
I-lil uzi vert-ephezulu